मंगलबार उपत्यकामा ३९६ जना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मंगलबार उपत्यकामा ३९६ जना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ?
मंगलबार उपत्यकामा ३९६ जना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ?	मंगलबार ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण, निको हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
भदौ २३ गते, २०७७ - १६:३७
मंगलबार ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण, निको हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा ३९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
काठमाडौंमा ३ सय , ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा ५८ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको हो ।
काठमाडौं उपत्याकामा भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा पछि पनि संक्रमितको संख्या घटेको छैन ।
यसैगरी मंगलबार ९ सय २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार १० हजार ६ सय ११ जनामा परिक्षण गरिएको थियो ।
यो सँगै संक्रमितहरुको संख्या ४८ हजार १ सय ३८ पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या ३२ हजार ९ सय ६४ रहेको छ भने मंगलबार मात्रै निको भएर घर फर्किनेको संख्या २ हजार २ सय ८७ जना रहेका छन् । याे ६८ प्रतिशत भएकाे बताइएकाे छ ।
आज थपिएका सहित नेपालमा सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या १४ हजार ८ सय ६८ जना जना रहेका छन् । यि मध्य ६ हजार ८ सय १५ जना होमआइसोलेशनमा रहेका छन् भने ८ हजार ५३ जना विभिन्न अस्पतालमा रहेका छन् । जसमध्य १ सय ४४ जना आइसियु र २३ जना भ्याण्टिलेटरमा उपचार भईरहेको छ ।
यसैगरी मंगलबार ६ जनाकाे काेराेनाका कारण मृत्यु भएकाे छ, याे सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेकाे संख्या ३ सय ६ पुगेकाे छ ।
विस्तृत विवरण हेर्नुहोस्, कुन जिल्लामा कति ?
भदौ २३ गते, २०७७ - १६:३७ मा प्रकाशित